Aakar August 12, 2010
संयुक्त राष्ट्रसंघ को पहल मा सन् २००० देखि मनाउन थालिएको International Youth Day (IYD) अर्थात अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस को ११ औँ संस्करण आज अगष्ट १२ का दिन संसारभर मनाइँदैछ ।
“Dialogue and Mutual Understanding” भन्ने नारा का साथ मनाउन लागिएको युवा दिवस को दिन मा संसारभर युवा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु हुँदैछन् । नेपाल मा पनि युवा दिवस को अवसर पारेर, विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना भइरहेकाछन् । हिजो ११ अगष्ट का दिन, Challenges of Youth विषयक कार्यक्रम रसियन कल्चर सेन्टर, कमलपोखरी मा गरिएको थियो भने आज विहान १० बजे देखि फ्रान्सेली केन्द्र (Alliance Francaise de Kathmandu)GAA Hall, Thamel मा ‘युवा जात्रा’ नामक कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ । हिजो पनि फ्रान्सेली केन्द्र (Alliance Francaise de Kathmandu) मा विविध कार्यक्रमहरु को आयोजना गरिएको थियो । ‘युवा जात्रा २०१०’ (Youth Jatra 2010) मा टेवल टक, पोस्टर प्रदर्शनी, युवा वजार, फोटो प्रदर्शनी, थियटर लगायत विविध कार्यक्रम हुनेभएको छ । युवा देश को शक्ति मानिन्छन् तर अहिले युवाहरु मा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दैगएको छ । राजनैतिक अस्थिरता, वेरोजगारी आदि विविध समस्याबाट पिरोलिएका युवाहरु को गन्त्व्य विदेश नै हुने गरेको छ । खाडि मुलुक देखि, युरोप र अमेरिका सम्म लाखौँ नेपाली युवाहरु रोजगारी गरिरहेका छौँ, अनि सरकार रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मख्ख छौँ, हामी मख्ख छौँ, तर यो कुरा साँचो हो कि, रेमिट्यान्स ले देश धनि हुन सक्दैन । जवसम्म देशमा रोजगारी को सिर्जना हुँदैन, जवसम्म देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम हुँदैन, तबसम्म देश सवल हुने सम्भावना छैन, तबसम्म युवाहरु भौँतारिरहनेछन्, यो हाम्रो विडम्बना हो ।
सबैभन्दा धेरै, राजनैतिक अस्थिरता कै कारण युवाहरु का समस्याहरु बढ्दैछन् । पढ्यो, जागिर छैन, आफ्नै केही नयाँ काम गरौँ भने, लगानि छैन । जनयुद्द को कारण पछाडि धकेलिएको देश, अहिले सम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । युवा भन्ने वित्तिकै, देशको राजनिति, शिक्षा,विकास निर्माण, रोजगारी, आदि धेरै कुरा जोडेर आउँछन् ।
देशका नेताहरु युवा विद्यार्थी कै काँध टेकेर सत्ता मा जान्छन् । राजनैतिक संगठनहरु ले युवाहरुलाई उनीहरु को सत्ता को भर्याङ बनाइरहेका छन् । युवा शक्ति को कुरा गरेर नथाक्नेहरु नेताहरुको पार्टिको नेतृत्व मा कुनै युवाहरु छैनन् । हामीलाई सबैकुरा उल्टो लाग्छ, गलत लाग्छ, यसरी गरेको भए हुन्थ्यो भने झैँ लाग्छ तर विडम्बना हाम्रा कुरा सुन्ने थोरै मा्त्र छन्, बुझ्ने त झन औँला मा गन्न सकिने व्यक्ति नेपाल मा होलान् ।
राजनिति को सञ्जाल नै यस्तो छ कि, नेतृत्व पंक्ति मा सबै बुढा बुढा नेता छन्, उनीहरु युवालाई अगाडि जानै दिँदैनन् । राजनिति मात्र नभनौँ सबै क्षेत्र मा युवा विज्ञहरुको आवश्यकता छ, तर सँधै जसो नै युवाहरु को कुरा सुनिँदैन । जस्तो कि, केही वर्ष पहिले पुल्चोक क्याम्पस का विद्यार्थीहरुले ‘प्लेन’ बनाए तर त्यसको परिक्षण गर्न पनि भन्ने बित्तिकै पाइएन । अरु को भर नपरी आफैँ केही नयाँ गरौँ न भने पनि, सरकारी निति र नियम को अभाव मा काम गर्न नसकिएको अवस्था छ । युवाहरु मा लगानि खै ? नयाँ काम गर्न चाहने युवाहरुलाई विनाधितो ऋण दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल मा युवा को लागि भनेर, युवा मन्त्रालय छ । तर युवा मन्त्रालय बनाएर एउटा कुनै बुढो बुद्धि भएका नेतालाई मन्त्री बनाँउँदै मा, हामी खुशी हुनुपर्ने कारण छैन । किनकी काम गराइ, उही पुरातन शैली छ, जुन हामीलाई व्यवहारिक लाग्दैन । नयाँ प्रविधि र युवा ले गरेका कामहरु नबुझ्ने उही नेताहरु छन् । राजनितिलाई किन पनि जोड दिइरहेको छु भने, सबैकुरा राजनिति बाट प्रभावित भएको अवस्थमा युवाहरु पनि नेपाल को घिनलाग्दो राजनिति को शिकार भएका छन् । बेरोजगारी, अनि नातावाद र कृपावाद को शिकार युवाहरु भएका छन् ।
हाम्रो राजनिति किन पनि फेलर भएको छ, किन देश अविकसित छ भन्ने कुरा मा १ जना साथि ले भनेको कुरा सम्झन्छु । SLC को नतिजा सँगै, युवाहरु को भाग्य कोरिएको हुन्छ । जो फस्ट डिभिजन भए, उनीहरु प्राय: इन्जिनियरिङ तथा डक्टरी, विज्ञान र प्रविधि तिर लाग्छन् । जो सेकेन्ड डिभिजन छन् उनीहरु कमर्स अर्थात म्यानेजमेन्ट तिर लाग्छन् । अनि थर्ड डिभिजनहरु एजुकेशन पढेर, मास्टरी र राजनिति तिर लाग्छन् । अनि यहाँ यति भइसकेपछि सबै कुरो उल्टो हुन जान्छ । थर्ड डिभिजनहरु मास्टरी गर्छन्, देश को शिक्षामन्त्री बन्छन्, प्रविधी, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्छन् । उनीहरु निती निर्माण गर्छन्, अब आफैँ सोच्नुस् कस्तो निति बनिरहेको होला, देश कसरी चलिरहेको होला । उनीहरु को निती निर्माण अन्तर्गत रहेर, सेकन्ड डिभिजन म्यानेजमेन्टहरु फस्ट डिभिजनलाई म्यानेज गर्छन् । अनि फस्ट डिभीजनवालाहरु को विज्ञान प्रविधि विना देश विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा कसले सुन्छ होला ? साथि को कुरा एकपटक सोचेर हेर्दा निकै हदसम्म सहि लाग्यो । भन्ने बेला युवा युवा भन्ने तर जो सक्षम छन् तिनीहरुलाई चाँहि त्यही असक्षम, बुढा र पुरातन सोचवालाहरु ले कन्ट्रोल गर्ने, के यसो भएपछि, विकास सम्भव छ त ?
सोच्दा पनि स्थिति भयावह लाग्छ, कारण देशमा बेरोजगारीहरु बढदैछन्, विदेश पलायन हुँदैछन् । नैराश्यता का कारण युवाहरु कुलत मा पनि फस्दैछन् । देश को कमान्ड, राजनिति को कमान्ड युवाहरु ले सम्हाल्नु पर्ने बेला मा युवाहरुलाई अझै तलै थिचेर राखेका छन् । राजनिति कै नियम पनि अचम्म को छ, भोट १८ वर्षमा हाल्न पाउने तर मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न ३५-४० कटेको हुनुपर्ने । औसत आयु ५५ वर्ष भएको हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीहरु ६०-६५ को उमेर का हुन्छन् । प्रविधि को बारेमा केही ज्ञान नै नभएकाहरु मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन् हाम्रो देशमा ।
कुरा गर्ने नै हो भने,युवाका समस्याहरु मात्र देखिने छन् कारण देश को निती निर्माण तह मा युवाहरु नपुगेसम्म समस्या ज्युँ का त्युँ रहनेछ । हाम्रो देशमा नि अचम्म को गणना हुन्छ, ४०-४५ कटेका चाँहि युवा गनिन्छन् ।
खैर जेहोस, आशावादी भइराखौँ, चाँडै नै युवाहरु ले देशको नेतृत्व गर्नेछन् । ‘अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०१०’ को अवसरमा समस्त युवाहरु मा हार्दिक शुभकामना !!!
Rajesh Ghimire August 12, 2010 at 1:45 PM
yo kura ali pachya bhaena aakar bro kinaki distinction lyaauneharule pani arts ra commerce padekaa chhan bhane 2nd division lyaaunele pani science padera ramro natijaa lyaaekaa chhan...... yo kura pachhauna chahi hajmola nai chahiyo ki.....
Aakar August 12, 2010 at 1:55 PM
I'm not saying those things as you have mention. This is justajoke, and some how it represents the scenario.
yehi nai ho vaneko haina hai bro...justasymbolic meaning vanna khojeko ho.... And it's mainly targeted to politicians only...भन्ने बेला युवा युवा भन्ने तर जो सक्षम छन् तिनीहरुलाई चाँहि त्यही असक्षम, बुढा र पुरातन सोचवालाहरु ले कन्ट्रोल गर्ने, के यसो भएपछि, विकास सम्भव छ त ?...
sorry for inconvenience. maile kasailai naramro, ani subject naramro vanera, descrimination garna khojeko pani haina...just hamro trend yesto chha vanera dekhauna khojeko vane pakkai ho...aafno society ko trend herna pani sakincha ni haina ra...
वेदनाथ पुलामी (उमेश ) August 12, 2010 at 7:18 PM
Happy Youth Day .......
Rajesh Ghimire November 12, 2010 at 4:02 AM